ne admin pane 21-10-08
Polyethylene nebwe sezvo huru mbishi zvinhu acho, pashure extrusion Kuumbwa mvura wedzera polyethylene nenyere anonzi Pe mvura pombi. Pe mvura pombi yekugadzira michina? Germany Como yekugadzira mutsara. Iyo michina inogadzirwa nehunyanzvi hwepamberi hwetekinoroji, iine h ...
PE ndeye polyethylene plastiki, yepurasitiki yakakosha, mabhegi epurasitiki, kuputira epurasitiki, nezvimwewo, ari PE, HDPE chiyero chekristallini, isiri-polar thermoplastic resin. Kuonekwa kweiyo yekutanga HDPE yakasviba machena, iine imwe nhanho yekushanduka muchikamu chakaonda. PE ine yakanakisa res ...
CNPC Yenyika Petroleum uye Natural Gasi Pipe Injiniya Technology Research Center yakagara muXi'an
Munguva pfupi yapfuura, PetroChina National Petroleum uye Natural Gas Pipe Engineering Technology Research Center Co, Ltd. yakavambwa neBaoji Steel Pipe Kambani yakavhurwa muXi'an. Vadzidzi veLi Helin naMao Xinping weChina Academy yeUinjiniya, uye Gao Deli, mudzidzi weCh.
Yekushandisa mienzaniso ye polyethylene (PE) pombi dzemvura
Abstract Polyethylene (PE) mupurasitiki yekumanikidza mapaipi yakawedzera nekukurumidza munyika mumakore achangopfuura. Chinyorwa ichi chinopa mienzaniso yakati wandei yekushandisa kwepombi ye polyethylene (PE) yekuwanisa mvura mumapurojekiti emvura ekutaurisa mukukurudzira nekushandisa. Polyethylene (Pe) S ...
"Sichuan-East Gasi Kufambisa" pombi refu-refu inopa kugadzikana kwakananga kuWanyuan Guta
Iyo Puguang gasi munda, pekutangira chirongwa che "Sichuan-to-East Gesi Kufambisa", ine mapaipi-marefu mapaipi ayo anopa yakatsiga kugovera kwakananga kuWanyuan Guta, uye mutengo wevazhinji uye vekutengesa gasi chaiwo yave kuda kudzikiswa. Musi waApril 20, mutori wenhau weSichuan online akadzidza ...